Shandura NICKY: Martin Vrijland
Vhura tsamba kuna Peter R. de Vries munyaya yeNicky Verstappen
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER	by Martin Vrijland	musi wa13 December 2018	• 13 Comments
Anodiwa naPeter R. de Vries, ane chido chikuru ndakatevera nhepfenyuro nemushumo nicky Verstappen, umo Jos Brech ari kutongwa pachena. Nokuda kwekujekesa: Ini handiri mudziviriri waJos Brech kana chero kumanikidzwa kwepabonde kana muurayi. Zvisinei, zvinoratidzika zvakasimba kuti nyaya iyi ndeyepfungwa [...]
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER	by Martin Vrijland	musi wa12 December 2018	• 10 Comments
Kubva kune avo vanoita tweet yemutori wenhau weTelgraaf Saskia Belleman, zvinoratidzika kuti iyi Nicky Verstappen (kunyengedza) nyaya yepfungwa haisi chinhu kunze kwehurukuro. Mamwe ma tweets anotevera zvinoratidza kuti Jos Brech akabvuma kuva nevana nekuona zvinonyadzisira paP PC yake, asi kuti vanoti ivo vakabatwa nemavirusi. Jos [...]
Mapurisa e33 anoerekana awana faira yekare yeJos Brech gore negore!
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa9 November 2018	• 0 Comments
Yakanga iri kutsvaga nokukurumidza, hongu, uye yakanga iri basa risingaiti, asi kamwe-kamwe kwaiva nefaira yekare yaJos Brech, iyo yaaizoita zvepabonde nevana vaduku. Chiitiko ichocho chakakonzerwa nemamiriro ezvinhu, asi izvozvo hazvina basa. Peter R. de Vries ave aine shamwari dzake dzose [...]
Izvo zvakanaka zve databasi reDNA redu pane kuwedzera kugadzirisa mhaka dzekuuraya
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we26 September 2018	• 11 Comments
Zvechokwadi, yose yeNetherlands inonunurwa kuti nyaya yaNicky Verstappen yakatungamirira kubata raJos Brech. Pakupedzisira, DNA yakatungamirira kutapwa kwaJasper Steringa mumhosva yeMarianne Vaatstra, saka DNA ndiyo yakaguma. Iri mune chero ripi zvaro rakatungamirira kune imwe mvumo yemitemo yakatangwa nehondo yenhau inonzi Peter R. de [...]
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we25 September 2018	• 8 Comments
Zvizhinji zvemhosva dzenguva refu dzekuuraya dzakagamuchirwa zvikuru mumitambo yezvinobudisa zvino yava kugadziriswa nemashiripiti izwi DNA. Zvakanaka, zvinogadziriswa kuburikidza nemutangariro nemashudhiro naPeter R. de Vries ndokubva vatamisa bhisikiti rezvemiteresi kumatare anotora mutongo wevanhu vose vakanamatira, pasina kubvumidzwa kwepamutemo. [...]
Nzira iyo vanobudisa nhau vanonyora nyaya yavo pakuongorora kwakanyanya uye vachienderera mberi vachipfira nhau yavo yakasimba (Jos Brech)
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we24 September 2018	• 3 Comments
Ndakashamisika ndakatarisa kudzokorora kwaPauw, umo gweta raJos Brech, Gerald Roethof, rakanyatsogadzirisa nyaya yake kune chinyorwa chandakabudisa rimwe zuva risati rasvika. Zvakanga zvichishamisa kwazvo kuti pane kamwe kamwe zvigaro zviviri zvitsva zvachose patafura. Zvitsva zvitsva zvinoita kuti vanhu vave nechokwadi pamusoro pe [...]
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we20 September 2018	• 12 Comments
Kana iwe, seMutongi wePublic, uri kushanda kwemakore kuti ugadzirire vanhu kuti uwane matanho mutsva kuburikidza neSpyOp (kushanda kwepfungwa), iwe uchazove nechokwadi chekuti iwe une kodhora dzakakodzera munzvimbo dzakakodzera kuti uenderere nenyaya kusuruvara. kuti apinde. Izvozvo zvinoreva kuti iwewo unobvumirana [...]
Sei Jos Bre Brech akanga asingazivikanwi kutakurwa?
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we6 September 2018	• 2 Comments
Nyaya yakapoteredza Jos Brech, uyo anonzi muurayi uye mutambudzi weNicky Verstappen, akafuridzirwa kusvika kumusoro. Dzulo akaendeswa kuNetherlands ane ndege yega. Inogona kutenga mari! Chirongwa chekutiza ndege chakanga chisingaitike, nokuti tiri kutaura pamusoro pechirwere-chinotyisa mishonga ishe uyo aigona kusunungurwa neshamwari dzake dzefia chero nguva. [...]
DNA iro shoko remashiripiti rinogadzirisa kuponda kwega uye kushungurudzwa kwepabonde!
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 30 August 2018	• 3 Comments
DNA ndiyo nzira itsva yemashiripiti yemapurisa uye kururamisira uye munhu wose akazara kurumbidzwa! NeDNA unogona kugadzirisa zvachose zvinhu zvose. Somuenzaniso, kana muvakidzani wako awanikwa akafa uye pane DNA pane zvipfeko zvake, zvino tinoziva pakarepo kuti muurayi ndiani! Icho ndicho chaicho chiri kubudirira mune teknolojia [...]
Kuita mhondi muNicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
Akaiswa mukati NICKY TRANSFER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 29 August 2018	• 1 Comment
Nhamba yeNetflix yakanzi 'Kuita Mhondi' inoratidza kuti vanhu vanogona sei kubatisirwa pamusana pemagariro asina kunaka kwemakore. Apo DNA iri munyaya idzi inowanzotora chikonzero chekudzikinura, DNA inogonawo kuva mutsva mutsva wekuita Kuuraya Murwere kunobva. Mukushanda kwepfungwa (PsyOp) unoita chokwadi [...]
Kushanya kwakazara: 2.635.149